Isiraely mandrara ny olom-pirenena tsy vita volo amin'ny toerana rehetra ampiarahana amin'ny Synagoga
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Israeliana » Isiraely mandrara ny olom-pirenena tsy vita volo amin'ny toerana rehetra ampiarahana amin'ny Synagoga
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Israeliana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny praiminisitra israeliana Naftali Bennett
Ireo izay mandà tsy hanao vaksiny dia “manimba ny ezakantsika rehetra”, hoy ny praiminisitra israeliana Bennett.
Mitombo hatrany ny isan'ireo trangana virus coronavirus vaovao any Israely.
Ny Isiraeliana tsy vita volo dia tsy mahazo alalana na aiza na aiza misy toerana misy olona maherin'ny 100, na anatiny sy ivelany.
Mazava ny siansa: mandeha ny vaksiny, mahomby izy ireo, azo antoka.
Ny praiminisitra israeliana voafidy Naftali Bennett dia nanambara androany fa ny mponina rehetra tsy voafantina Isiraely Tsy ho ela dia ho voarara amin'ny toeram-bahoaka na an-kalamanjana mitazona olona 100 na mihoatra. Ity fandrarana ity dia hahitana koa ireo sinagoga.
Ireo olona izay mandà ny vaksinin'ny COVID-19 dia "manimba ny ezaka ataontsika rehetra", hoy i Bennett androany, satria mitombo hatrany ny isan'ireo tranga vaovao momba ny virus coronavirus ao amin'ny firenena.
Raha mahazo ny vaksininy ny tsirairay dia afaka miverina amin'ny laoniny ny fiainana, fa raha olona iray tapitrisa kosa mandà ny valo tapitrisa hafa dia tsy maintsy miaritra fanidiana, hoy ihany ny praiminisitra.
"Misy fotoana tsy maintsy hijanonan'ity dinika ity," hoy i Bennett tamin'ny firenena. “Mazava ny siansa: mandeha ny vaksininy, mahomby izy ireo, azo antoka.”
Nanomboka ny 8 aogositra lasa teo, nanambara i Bennett fa izay rehetra mandà ny fanaovana vaksiny dia tsy hahazo alalana intsony amin'ny toerana "olona mihoatra ny 100, na an-trano na an-kalamanjana" - anisan'izany ny teatra, hetsika ara-panatanjahantena ary trano fivavahana. Raha hiditra dia tsy maintsy mampiseho porofo fanaovana vaksiny ny olona, ​​porofo fa nanana COVID-19 izy ireo ary sitrana, na fitsapana ratsy, azo tamin'ny volany manokana.
Israel dia nampiasa ny vaksinin'ny coronavirus Pfizer-BioNTech mRNA. Raha ny filazan'ny Ministeran'ny Fahasalamana dia 64% ny fahombiazan'ny vaksinina manohitra ny aretina simtika ary 93% ny fanoherana ny aretina mafy.
Mrs Jane Godfrey hoy:
16 Aogositra 2021 amin'ny 02:22
This is so very wrong and incorrect as far as science goes it’s really awful and extremely detrimental to our homeland. If this new Israeli President was truly studying the science behind these covid vaccines, he would in fact discover that the reason the covid cases have risen within Israel itself is because of these covid vaccines themselves and not because of those who have refused to have injected into themselves and experimental drug that has even failed it’s safety trails, as all animals used within the trails of these vaccines died, All of them.